पराकम्पन-मा घरको खोजी - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचार पराकम्पन-मा घरको खोजी
पराकम्पन-मा घरको खोजी
May 16, 2020 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
अब साहित्यमा सौम्य भाषामा आदर्श नारीको छवि मात्र पितृसत्ताले चाहेको हो? नारी लेखन पितृसत्ताको विरोध हो कि, सत्ता भित्र सत्ता खोज्ने प्रणाली हो कि या आफ्नै सत्ताको निर्माण? अब आडम्बर नारीवाद , अप्राकृतिक तर्क , गाली जस्तो , भद्दा व्यर्थको पुरुष द्रोह – कृतिको भूमिका बाँध्दा लेखिने ( fashion) फेसन हो कि? या घरको छोरी साँझमा संघारबाट बाहिर हुँदा बाउले दिएको ( fatherly) बाउको डरको अर्ती हो की या अधीनमा राख्ने (shouting down) कडी? कतै यो पनि हिंसाको साहित्यिक विस्तरण त हैन ?
यसपाली दार्जिलिङ किताब मेलामा जान पाइँदैन कि भन्ने डरले मन पिरोली रहेको थियो । शनिबार अनि आइतबार पनि जान पाइएन । तर सोमबारको दिन ड्युटीमा हुँदै पनि व्याङ्क कै एउटा काम निकालेर गइयो दार्जिलिङ । अनि सिधै म सुरज रोसुरी( सम्बोधन पब्लिक केशन) लाई भेट्न गएँ । उनी पुस्तक विमोचनमा व्यस्त रहेछन्। भनी राखेँ, ‘म अहिले आउँछु, राम्रो किताब अलिक निकाली राखी दिनु होला।’
उहाँले पराकम्पन कथा सङ्ग्रह पनि हालिदिनु भएछ ।
त्यसपछि लक डाउन । सोचें सबै पढ्ने छु। हुन त पढ्नका निम्ति समय चाहिँदैन रहेछ । जाँगर र जोस् पो चाहिँदो रहेछ । यसै त म अलिक अल्छे पाठक हूँ । किताब धेरै किन्छु , तर पढ्छु छानेर । तर जब पढ्छु , पढ्छु खिप्ती गरेर , मन लाएर । भूमिकादेखि अन्तिम पाताको अन्तिम हरफसम्म । म अलिक र्‍याम्डम पाठक पनि हुँ । किताबको अनुभव फील गर्न कुनै पन्नाबाट पनि पढ्न सुरु गर्छु । किताब हातमा राखेपछि एकपल्ट सुघ्छु । नयाँ किताबको वास्ना मिठो लाग्छ । तर आजकालका किताबमा हामी भुँइक्लास पढ्दाको जस्तो सुवास्ना छैन , किताबहरूमा त्यो महक नै छैन । कमानको हपहप्ती गरम , दिउँसोको एघार बजी स्कूल कोठामा खोलाबाट आएको लिखुरी हावा अनि किताबहरुको त्यो बाक्लो महक। आहा ।
सधैं झैं, सन्ध्या आचार्यको पराकम्पन हाथमा लिएर इन्डेक्सको पेजमा गएँ। हेरें, कथाका शीर्षकहरु । साह्रै जोशिलो त लागेन । किताब बुझ्न सन्ध्याको आफ्नो कुराहरु पढें। त्यसपछि धन्यवाद ज्ञापन । भूमिका जय क्याक्टस सरको रहेछ, लोभ लागेर आयो । कथा पढ्न बीच पन्नाबाट सुरु गरें । कथा शीर्षक कथा मात्रै ।
‘सिरानीहरु अलि मज्जाले मिला न हौ’,- यति बेला, सुत्ने तर्खरमा हामी ।
‘आsss होस् है । जिन्दगी मिलेको हुन पर्छ भै गो।’
आहा यो लाइन त जुलुम लाग्यो । हामी बुढा बुढीको मजाकमा गफ सफ जस्तै लाग्यो । अब जिन्दगीमा यति किताब त पढी सकियो, कुन कुराले पाठकलाई क्लिक गर्छ त्यो छिचोल्न सक्ने भएँ। राम्रो लेख्न सक्छु सक्दिन त्यो अर्कै कुरा हो । कथा पढ्दै गएँ। पढ्दै गएँ । मनमा विचार खेल्दै गयो । विचार उप्जिँदै गयो । अन्तमा आएर टक्क उभिएँ । कथामा यसरी लेखेकी रहेछिन्।
‘अँ हुँ नु त हो, घटना मात्रै त न्युजमा पाइन्छ नि…….. सायद विचार नभएको ठाउँमा घटना घट्दो हो कि ?’
‘सुतौँ अब’- त्यो भन्छे ।
‘सिरानी नमिलाउनु ?’- म सोध्छु ।
‘मिलेको त जिन्दगी पो हुन पर्छ।’ – त्यो भन्छे ।
कथा यसरी नै सकियो । कथामा कथ्य के थियो , राम्ररी ध्यान दिइनँ। तर कुराको कुलो काट्न निकै सिपालु लाग्यो सन्ध्या । गाउँमा जसरी बाउ चपरा बोकेर बर्खामा जमेको पानीको कुलो काट्न जान्थे । अनि आमा कराउँदै पछि पछि यो बुढोले त केई जान्दैन हौ , भनेर आफैंले छेउ कुना मिलाएर जमेको पानीलाई बाटो लाउँथिन् । त्यस्तै सिपालु ।
सन्ध्या को हुन् ? भनेर पछिल्लो पातामा फोटो हेरें । ज्यादै उदास फोटो हालेकी रहेछिन् । प्रकाशक ज्ञानकुञ्ज बुक्स । मूल्य १५० रू । मूल्य असुल हुन्छ जस्तो लाग्यो, एउटै कथा पढ्दा नै । सबै कथा पढी सकियो । किताब बन्द गरेर हेरें। कालो कभरमा रातो हरफले लेखिएको पराकम्पन अनि सेतो दुईवटा पाइलाका जस्तै डोबहरु। पराकम्पन विध्वंस पछि आइरहने सम्झना हो । रिमाइन्डर हो । भूमिकामा जय क्याक्टस सर लेख्छन् ‘पराकम्पन’ मूल कम्पन वा संघटना जत्तिको प्रभावकारी नहुँदा पनि यसले सृजना गर्ने मानसिक आघात, अवसाद, सन्त्रास र पीडा चीरकालिन र अशय हुन्छ।’
डोब पनि सम्झनाका प्रतीक हुन् । अनि ती सम्झनाहरु घर तर्फ फर्किहेका छन् । किनभने सम्झनाहरु जहिले पनि घर फर्किन्छन् । ती प्रतीक पुष्टि गर्ने अरु क्लू ( clue) कतै कहीं नभेटिएता पनि एक पल्ट हेरौं पाठ ( टेक्स्ट) मा के छ।
पहिला हेरौं घर के हो त ? हिन्दीमा घर बुझाउने शब्द दुईवटा छन् । मकान अनि घर । इङ्ग्लिशमा होम अनि हाउस । नेपालीमा होम अनि हाउस बुझाउने एउटै शब्द छ, घर । सायद कोठा पनि होला । हाउस , मकान साधारणतः सधैं टिन , छत , सिमेन्ट , ईटा, काठ , बाकलले घेरिएको, बारिएकोको घेरा भित्रको ठाउँ, स्पेस मात्र हो । अब घर , होमको कन्सेप्ट मकान , हाउस देखि एक पाइला अघि बारिएको स्पेस मात्र नबुझाएर यसले बहु आयामिक ( मल्टी डाईमेन्सनाल ) अनि बहु विषयक ( मल्टी डिसिप्लिनेरी ) अर्थ , विचार ( कन्सेप्ट) बुझाउँदछ । घर चारै दिशाबाट घेरिएको ( enclosure and space ) मात्र नभएर यसले हामीलाई बाहिरी अतिक्रमणदेखि जोगाएर राख्ने, रक्षा दिने, ओत दिने बिचारलाई इङ्गित गर्दछ । आफ्नो जरा जोडिनुको ( Sense of belonging), सुरक्षा ( protection ), गोपनीयता (privacy) प्रदान गर्ने घेरा हो । जहाँ हामी हाँस्न सक्छौं । सम्बन्धमा गाँसिन सक्छौं । प्रेम , स्नेहले अनि ओतप्रोत हुन सक्छौं । आत्मासम्मान सँग बाँच्न सक्छौं । हालमा विभिन्न विधाहरूमा घरको कन्सेप्ट अनि आइडियाको चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । समाज विज्ञान, अन्थ्रोपोलोजी , मनोविज्ञान , इतिहास , अर्कीटेकचर , दर्शन, धर्म आदि । घरलाई विभिन्न रूपमा परिभाषित गरिएको छ – घर, परिवार, स्वर्ग, स्व (सेल्फ), लिङ्ग ( gender), जीवन यात्रा, सुखद अनुभूति-अनुभव आदि ।
पराकम्पनमा पनि घर ( बिम्ब/ प्रतीक) केन्द्रियभाव मुख्य भएर अनि घरि घरि आइरहने बिम्ब हो, मेटाफोर हो । घर आमाको गर्भको प्रतीक पनि हो । हामी प्रत्येक मान्छेको पहिलो घर नै आमाको पाठे घर हो, गर्भ हो । कथामा घर बिम्ब विभिन्न विचार अनि रूपमा देखा परेका छन् । वास्तवमा एउटी नारीको “घर” साँच्चै कहिले उसको अफ्नो हुन्छ ? चाहे त्यो घरले घेरा भित्रको स्पेस बुजावोस या वैचारिक धरातल । घर उसको शरीर होस् या सोच । “घर” शीर्षक कथा नारीसत्ताको आफ्नै चेतनाको विरोधाभास या पृथक नारीसत्ताको अनुपस्थितिको स्वचेतको व्याख्या हो ।
‘सबभन्दा त दुःख त्यतिबेला लाग्यो जब मैले थाहा पाएँ कि म घरविहीन रहेछु साच्चिकै । म आफ्नो इच्छा मुताबिक कतै हिँडे भने मैले घर नै छोड्न पर्ने रहेछ जहिल्यै।’ .
‘मेरो घर खै?’
आमाले अधीनता अस्वीकार गरेको दिन आमाको पनि घर रहँदैन। चोइस भनेको कि घर कि अधीनता रहेछ।”
“घर” घर शीर्षक अनि प्रतीक/बिम्ब कथामा मातृसत्ताको अवस्थानको एउटा जटिल प्रश्न हो । पितृसत्तादेखि पर मातृसत्ताको के आफनै सार्वभौम सत्ता छ र ? के मातृसत्ताको आफ्नै भाषा (gender neutral) , सौन्दर्य , विवेचना पद्धति, शक्ति केन्द्र , आफ्नै सामाजिक हाईरार्की – छुट्टै दण्ड सहिंता , नैतिकता , सामाजिक मूल्य, मान्यता धार्मिक केन्द्र, जीवन दर्शन छिचोल्ने प्रक्रिया , सांस्कृतिक, साहित्यिक धारणा (canon) छ ?
यो जटिल प्रश्न हो ।
उत्तर सहज र चुढान्त पनि छैन । पुरुषसत्ताको हैकम नारी सत्तामा यति व्याप्त छ कि नारी सत्तामा निहित वैचारिक चेत पनि पितृसत्ताकै विस्तार ( extension) मात्र हो । “घर” कथामा ” मेरो घर खै” ? अभिव्यक्ति पनि यही हो । पितृसत्ताको परिधिभित्र नारीले कि चाहिँ सत्ता स्वीकार गर्न पऱ्यो या आफैलाई एडजस्ट: त्यहाँ देखि पर सबै बिद्रोहका कुराहरु, शब्दहरु, बिम्बहरु मात्र हुन् ।
शक्ति विनिमय र वाचाल ( पावर नेगोसिएसन अनि मनुवबरिङ) द्वारा नै पित्तृसत्ताले आफ्नो पावरको वर्चस्व कायम राखेका छन् । जहाँ वर्चस्वको अधिपत्य हुन्छ, त्यहाँ अधिकार प्रधानताको अनि हननको प्रश्न उठान हुन्छ नै। हिंसा र उत्पीडनको विवेचना हुन्छ नै । हिंसा उत्पीडन शारीरिक मात्र नभएर , आत्मिक , सामाजिक , भौगोलिक , मनोवैज्ञानिक , आर्थिक ,भावानात्मक , भाषिक अझै विभिन्न प्रकारमा देखा पर्छन् । व्याप्त छन् । अब हिंसा या उत्पीडनको विरोध कस्तो प्रकारको हुन पर्ने ? अनुनय , विन्ती-भाव , मान-मनितो गरेर या चडयेर गर्न पंर्ने हो या पुर्जोर विरोध ?
केही वर्ष अघि ग्यासका दाम बढ्दा विरोधका निम्ति आइमाईहरु सडकमा उत्रिएका थिए । मोदीज्यूको पोष्टरमा धूपकाटी , दियो जलाएर ( हामी दिन दुखीको बिन्ती सुन्नु होस् ) भन्दै भजन गाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ! कि सायद विद्रोह यसरीनै गरिनु पर्ने हो ? कथाको भूमिकामा जय क्याक्टस सर लेख्न हुन्छ ‘सन्ध्याको कथ्यले आडम्बरी नारीवादको वकालत नगरेर………नारी पात्र अप्राकृतिक तर्क र उटपट्याङ कार्य गर्दैनन् , बरू परिवार र समाजमा आफ्नो स्वत्वको निम्ति केही गम्भीर चुनौती र जोखिम उठाउन तयार रहेको पाइन्छ । ” यस्तै कुरा आरती ठकुरीको कविता सङ्ग्रह निशब्द उत्तर– को विमोचनमा कविता माथिको वक्तव्यमा डा महेश दाहालले भनेका थिए , ‘हिज आज नारी लेखनका कविताहरु गाली दिएका जस्ता लाग्छन् ! तर आरतीका कविताहरु मधुर भाषामा लेखिएका छ। ” पवित्रा लामाको म देह रातो रङ्गिन्छु को भूमिकामा श्यामल सर काठमाडौंबाट लेख्न हुन्छ , ‘मलाई अश्वेत अमेरिकी कविहरु एलिस वाकर र माया अन्जेलुले बढी अपील गर्दछन् । तिनका कवितामा यताको जस्तो भद्दा र व्यर्थैको पुरुष द्रोह भेटिन्न ! “
पुँजीवादी तन्त्र अनि विचार पराकाष्टमा छ। देशभक्तिय अनि धार्मिक उन्मादमा मान्छे भीडको रिसमा परिणत भै सकेको छ । भनौं भने पृतिसत्ता एक नैतिक र आत्मिक उथुलपथुल , क्राइसिसबाट पार भइरहेको समय छ । जस्तो प्रकारको बलात्कार पछिको जघन्य घटना असिफा , निर्भया अनि प्रियङ्काका शरीरसँग गरियो यो सिर्फ यौन अपराध मात्र नभएर त्यसपछिको एउटा सिरियस आत्मिक अनि मानवीय मूल्य-पतनको अवस्था वा क्राइसिस पनि हो । अब साहित्यमा सौम्य भाषामा आदर्श नारीको छवि मात्र पितृसत्ताले चाहेको हो? नारी लेखन पितृसत्ताको विरोध हो कि, सत्ता भित्र सत्ता खोज्ने प्रणाली हो कि या आफ्नै सत्ताको निर्माण?
अब आडम्बर नारीवाद , अप्राकृतिक तर्क , गाली जस्तो , भद्दा व्यर्थको पुरुष द्रोह – कृतिको भूमिका बाँध्दा लेखिने ( fashion) फेसन हो कि? या घरको छोरी साँझमा संघारबाट बाहिर हुँदा बाउले दिएको ( fatherly) बाउको डरको अर्ती हो की या अधीनमा राख्ने (shouting down) कडी? कतै यो पनि हिंसाको साहित्यिक विस्तरण त हैन ? साहित्यमा जिज्ञासा राख्न जायज बन्दछ । किनकि साहित्यिक मूल्य अनुसार कविता, कृति या त असल हुन्छ या खराब ! यसै त फेमिनिज्मलाई FemiNazism लेख्ने चलन त छँदैछ । साच्चै अभद्र भाषा ,गालीगलौज गर्दै उटपट्याङ्ग आडम्बरी नारीवाद कसले लेख्दैछन् हँ ?
घर प्रतीकलाई विभिन्न आयाम या रुपकमा उभ्याउन सकिन्छ । घर चारकुने स्पेस मात्र नभएर , गाउँ हुन सक्छ, बस्ती हुनसक्छ । राज्य हुन सक्छ । देश हुन सक्छ । आफ्नो शरीर, विचार ,भावना हुन सक्छ । त्यो घर नै हो जहाँ हामी सुरक्षित अनुभव, खुसी अनुभव, सम्मानित अनुभव गर्न सक्छौं । ढुक्कको अनुभव गर्न सक्छौं। बिना घरका मानिस कस्तो हुन्छ? मानिस किन पलायन हुन्छन् ? त्यै घर निर्माणका निम्ति खुसी बटुल्नका निम्ति , आत्म सम्मान सम्बन्धहरुको सङ्लो पानी बगाउनका निम्ति । यसैले नै सन्ध्याका पात्र-पात्राहरू घर निर्माण प्रक्रियाको अनन्त जाँतोमा पिसिएका छन् । कोही अबु धाबीमा छन्। कोही दिल्ली , चेन्नई, लण्डनमा छन् ।
‘महाप्रश्न’ मा रिनिता गाउँबाट पलायन भएकी छिन् । ऊ सुन्दर घर निर्माणको सपना लिएर दिल्ली गएकी छिन् । त्यसपछि
‘ घरको पुरानो खरको छाना अब रहेन । टलक्कै टल्किने च्यादर ओडेर निच्च हाँसेको छ घर । “
गाउँमा सुन्दर घर निर्माण प्रक्रियामा आफ्नै शरीर ( पाठेघर) भाडामा दिएकी छिन् (सरोगेट) ।
” सायद अन्तिम अध्याय” मा घर निर्माणको खुशीको प्रक्रिया –
” आमा हुन आँट्यौ कि ?” – जिस्काई दिन्छु ।
” म त कुन्नी तिमी पो बाबा हुन आँट्यौ होला । ” दुवैजना हाँस्यौ एक क्षण ।-
फेरि यसरी भत्किन्छ घर –
” सी ए लास्ट स्टेज ” – अलि छिटो भए युटरेस ( पाठेघर घरको निर्माणको पहिलो एकाई) रिमोव गर्न मिल्थ्यो । अब। हुँदैन । “
पराकम्पन -२ मा निला सुब्बाको बलात्कृत भएर पाठेघर धलीमली भएको छ । त्यस पछि जन्मेको छोरीलाई वैधानिक नाम (मजबूत घर) दिन पर्ने कुराको मानसिक द्वन्द अनि पीडा ।
“उत्तरार्द्धतिर” कथामा घरको बिम्ब बहुआयामिक सतहमा (multi layer) उभिएको छ । लाइभ इन सम्बन्धमा ( (पाठे) घर अवैधानिक सम्बन्धमा) उजाडिएको छ । सिङ्गल मम भएर बाँच्न परेको छ लण्डनमा । लण्डन जान पलायन मात्र नभएर प्रायः केहीको आर्थिक सामाजिक (अस्पिरेशन) आकांक्षा पनि हो । त्यहाँ पनि घर निर्माण , विनिमणको प्रक्रिया छ । घर ( गाउँको याद) , घर ( पुरानो सम्बन्धको सम्झना) घर ( शरीर उजाडिएको अवस्था ) घर ( फेरि नयाँ घर बनाउनको हिचकिचाहट ) भित्र रुमलिएको छ ।
” भन्छौ नि अँ , भन्नु त सजिलै छ । मान-मर्यादा , इज्जत- प्रतिष्टा, रहर, इच्छा, परिवार, गाउँ घर, साथी संगी जम्मै सँग साटिएको यही ग्रीन कार्ड न हो ।”………. आई एम अ सिंगल मम , तिमीलाई थाहा छ ?……किन बिहे गरेको त ?….. अरु उपाय पनि त थिएन नयन । यहाँ बाँच्न कठिन छ ।…. वस्तावमा हामी लिभइन रिलेसनशिपमा थियौं के । …. त्यतिकै जेड जन्मिएकी हो । “………न घर न आमा बाबा । यसै पनि एक्लै उसै पनि एक्लै , यता भए नि उता गए नि ।” तर यो डायस्पोरिक लेखनमा जस्तो रूट (जरा) खोज्न हैन । किनकि सबै फर्स्ट जेनेरेसन पलायन भएकाहरु छन् । सन्ध्याका पात्राहरु एउटा घर निर्माणको अनन्त खोजाई ( eternal Search) अनि त्यस प्रक्रियामा अरु घरको (एकाई) विनिर्माणको द्वन्दमा पिसिएका छन् ।
घर( चिनारु, परिचित सम्बन्ध) सुरक्षाको स्थान मात्र होइन । नारी उत्पीडन , अपराधको अखाडा पनि हो । ९० प्रतिशत नारी उत्पीडन घरको चार दिवार भित्र हुन्छ । चिनाजना, सम्बन्धबाट नै हुन्छ । यो कुरा कथामा टड्कारो नदेखिए पनि कथामा यता उता छरिएको छ । पराकम्पन- २ मा राज्य (घर) निर्माणमा लागि परेका निला सुब्बा सिआरपीबाट बलात्कृत नभएर आफ्नै गाउँका मानिस या सहयोद्धा या सहयात्री ( नरेशबाट बिटुलो भएकी छिन्) ।
” उसले बलात्कृत आफू सम्झी र अझै बलात्कृत आफ्नो समाज सम्झी जसले बलात्कारीलाई भन्दा धेरै दोषी बलात्कृत र महिलालाई ठान्छ । “
” मोडेल”मा झुमा विजोयिनी नुड मोडेलको काम गर्छिन् ।” “अप्ठ्यारो लाग्दैन…..?”
“अप्ठ्यारो किन मान्नु ? जहाँ म सर सफाई गर्न जान्थेँ त्यहाँ मलाई नाङ्गिन लगाउँथ्यो । फाइल बोक्न गएको ठाउँमा नी मलाई थुप्रै चोटि नाङ्गिने आदेश दिइएको हो । अरू त के कुरा , म लुगा दोकानमा काम गर्थें , दोकान आफ्नै आन्टीको थियो ।………..
……. मध्य रातमा ….. अन्ति मेरो शरीरबाट कपड़ा उतार्न हत्तार गर्दै थिइन् ।” म के भएको थिए त्यो बेला , आई क्यानट एक्सप्लाइन् ।” …. तर यो पेसामा कसैले मलाई नाङ्गिने आदेश दिँदैनन्……..कपडा उतार्छु उनीहरू चित्र बनाउँछन् , त्यसपछि पैसा सँगै थ्याङ्क यू झुमा दिदी या बहिनी भनिराख्छन् । लु भन्नु होस् कुन बेस… …..लुगा बेच्न जाँदा , अफिस हुँदा नाङ्गिँदै हिँड्नु की नूड मोडेल…….l
” च्याटको मान्छे ” -मा भावना , विचार , मनको बन्द घर भर्चुअल (virtual) घरमा स्ट्रेन्जरलाई पस्न दिन्छन् । फेसबूकको संसारमा स्ट्रेन्जरसंग उनी ढुक्क अनुभव गर्छे ।
” प्रिभेसी सम्ममा दखल दिन थालेछ अब च्याटको मान्छेले ।….
न चिनेको हरसँग धेरै नबोल्नु …….. बरू तपाईं सँग न बोलुँला म । …… तपाईंले ठिकै भन्नु भएको रहेछ । नचिनेको….. च्याटको मान्छे अल्पियो ।………. अनामिका , चिनेको मान्छे पनि सप्पै ठिक हुँदैनन् , चिनेकाहरुलाई पनि विश्वास पटक्क नगर्नु है ।”
घरको मेटाफोर वैचारिक पक्षमा पनि देखा परेका छन् । घरमा सपनाहरु हुन्छन् । सपनाहरु देख्ने आँखाहरू / मनहरु नहुँदा घर शुन्य हुन्छ । “सपना मोह ” यस धारामा पढ्न सकिन्छ ।
” सपना नदेख्नु भनेको मर्नु त होइन?’- झस्किन्छु ।
“सपनाहरुसित” फेरि भेट भएपछि बल्ल म जीवित अनुभव गरिरहेछु । साच्चै सपनाहरु मर्नु भनेको म मर्नु थिएछ……”
अब मर्नु घर उजाडिनु हो त ? प्रत्येक धर्मिक/ दर्शनीय परम्परामा मर्नु/ मरण लाई घर सराईको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कुनै दर्शनले पीडादायी प्रक्रियाको रूपमा प्रस्तुत गरेका क्षण भने , कसैले सुखद । पूर्वीय दर्शनमा मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण लामो प्रक्रिया हो भने , पश्चिमी दर्शनमा एक निमेषमा संसार छाडेर स्वर्ग जानु हो । प्रभात चिसो एक लाइन कवितामा लेख्छन् त्यसको अनुभव यसरी – what if death is only mist and there is another world beyond ? “मृत्यु अनुभूति” यस्तै परम्परामा पढ्न सकिन्छ । शरीर छाडेर आत्मा अर्को संसारमा स्थान्तरित । यसको अनुभव कथामा छुन सकिने, अनुभव गर्ने सकिने झण्डै पारदर्शी छ । कसैले पनि अनुभव गर्न सकिने । कथामा दुई संसारको वर्णन , जहाँ लौकिक र अलौकिक विलीन भएको छ । जादुई यथार्थ ( magic realism) जस्तै । मेलाको घुइँचोमा रोटेपिङ खेल्दाको डर अनि आनन्दभूतीको चुली । वा माथि बिल्डिङबाट तल हेर्दाको अनुभव । जहाँ यो संसार अनि अर्को अनन्त संसारमा पारदर्शिता आएको छ ।
पराकम्पन मूल भूकम्प पछि आउने घरि घरिको मसिनो झट्काहरु हुन । मूल भूकम्प ( विध्वंस,विनाश) पछिका डर , सन्त्रास , आशंका (पराकम्पन) का तरंगहरू हुन । जातीय उन्मुक्तिको महासंग्राम अनि त्यसपछिका मसिना आन्दोलनहरुका विफलताले उपजाएको नैराश्य परिस्थितिको आत्मा अनुभूतिको (सेल्फ रियलाइजेसन, रेजिगनेसन अनि दिजेगसन) हो ।
” अब फेरि आन्दोलन हुँदैन होला है” । दस बाह्र पटक सोधी सकेको छ ।” आफ्नो घर नहुनु राज्य नहुनुको पीडाको बिम्बमा पढ्न सकिए त पनि आफ्नु घर बनाउन पैसा जोहो गर्नु- राज्य बनाउन होइन- दुई दशक पछिको सेल्फ रियलाईजेसन हो । जातीय अस्मिता अनि उन्मुक्तिको रोमान्टिक-विचार परम्परादेखि अलग्गिएर , परदेशमा एक्लिएर आफ्नो घर, छतको न्यानो लालसा राख्नु अस्मिता संग्रामको वीर रस युक्त रोमान्सेली ( heroic romantic) भेलबाट पर सरेर एन्टीरोमान्टिक परम्परा वा यथार्थताको धरातलमा अब आफ्नो ( individual as opposed to collective) केही होसको विचार ( notion) हो।
भूकम्पले( 86 को अन्दोलन) भत्काएको घरमा फेरि आफ्नै सानो घर बनाउने हिचकिचाहाटको डर हो । पराकम्पन विध्वंस पछिको सम्झना ( रेमिनेन्सस) हो ।
हरेक संग्रामको पछि एउटा सोच हुन्छ । प्रतीक हुन्छ । एउटा आदर्श युटोपिया हुन्छ ।
” क्रान्तिका कुरा गर्थे , जित्ने कुरा गर्थे , बन्दकी परेको माटोको कुरा गर्थे……. आफ्नै राजा , आफ्नै राज्य । अर्थात् छुट्टै राज्य ।” (प्रकाम्पन २) “अँ जानु त जानै पर्छ हाम्रो हाम्रै नानीहरूको लागि त हो । जाति माटो र अस्तित्वका निम्ति हरेकले अघि आउनै पर्ने ।”( मूल्य )”
त्यस युटोपिया प्राप्त गर्न धेरै कुरा गुमाउन पर्ने हुन्छ । धेरै पटक प्रयोग हुन पर्ने हुन्छ ।
“सक्ने भएर किन अघि जानु ? खोज्नेले भेट्छ – हिजोस्ति उभिएर जाति माटो र अस्तित्वको कुरा गर्नेले नै भन्दै थियो ।” ( मूल्य)।
सारा संसारमा युद्धको सोझो असर बेसी भागमा मर्दलाई पर्दछ । उसले दुःखदायी मृत्यु वरण गर्नपर्ने हुन्छ । तर दुःख,पीडा क्षणिक हुन सक्छ या उ बहादुरी साथ सहिदको उपाधि प्राप्त गर्न सक्छ । उसले मृत्युमा विजय प्राप्त गर्न सक्छ । तर मर्दले ज्यान गुमाउन परेता पनि युद्दको बाक्लो अनि गहिरो नकरात्मक असर , पीडा आइमाई जातिले अनि छोरा छोरीले लामो समयसम्म झेल्न पर्ने हुन्छ।
“उनले सहादत प्राप्त गरे । उसको सहारा हरायो । ऊ विधवा भई । छोरा टुहुरो ।” ( मूल्य) । त्यति मात्र नभएर आर्थिक तङ्गी, सामाजिक बहिष्कार , शाररिक प्रताड्ना , बलात्कार विस्थापन जस्ता कुराहरु पनि झेल्न पर्ने हुन्छ ।
पराकम्पन- २ कहिले उजागर नभएको आन्दोलन पछिको पीडा हो भने आन्दोलनमा बलात्कृत भएपछिको विस्थापन, पलायन, अनि गाउँ फर्किएर जन्मिएकी छोरीलाई बाबाको नाम ( घर) दिन पर्ने मानसिक अनि सामाजिक द्वन्दको कथा पनि हो ।
” अमन्ना सुब्बा “
“बाबाको नाम ?”
” स्यारपी ” स्यार्पी पनि नाम हुन्छ ? लाठेप्री केटी।
आमा ! बाबाको नाम के हो ? आमाको नाम लेखिदिनु भन हेडसरलाई ।
उनका पात्रहरू ” चामे र गौथली ” झै जीवन भन्दा ठूलो ( लार्जर द्यान लाइफ) छैनन् । ” माछाको मोलको रने” झै समाजको एक तप्काको कालजयी प्रतिनिधि नबन्ला । सन्ध्याका पात्र- पात्राहरु सबै घर फर्किने सङ्घर्षमा छन् । किताबको खोलमा भएको दुईवटा पाइलाका डोब जस्तै। या तिनीहरू (घर खोजाई) को अनन्त यात्रामा छन्। चाहे त्यो घर बैधानिक बाउको नाममा होस् , माटोमा होस् , टिन सिमेन्टको घरमा होस् , सम्झनामा होस् या सम्बन्धहरुमा । या मनको बन्द कोठामा। सबैले केही न कही खोजिरहेका छन् मसिना ठूला समस्याहरूमा, कुनै समाधान ( सोलुसन) बिना । हामी जस्तै चुपचाप । अदृश्य । ओझेल । आफ्नै सानो सानो युद्ध लड्दै । सायद उत्तरआधुनिक जीवन यही हो । उत्तरआधुनिक चरित्र यही हो । सन्ध्या पात्र-पात्राहरुको संवादमा घटनाहरुको कथा बुन्न सिपालु छिन् । उनी कथाद्वारा शिक्षा दिन चाहँदिनन् तर परिघटना देखाउँन चाहन्छिन् । कहीं कतै आफै पात्रहरुसँग संवादमा छिन भने कतै आफै संवाद सुनिरहेकी छिन् , छक्क पर्दै । उनी अञ्चलिक भूगोल वर्णनमा ऊर्जा खेर फल्दिनन् । पात्रा संवादमा चरित्रको मन चिहाउन सक्षम बने पनि गहिराइमा पात्राहरुको मनोविश्लषण गर्न सकेकी छैनन्। यसैले उनका पात्र- पात्राहरू (one dimensional) छन् । चरित्र निर्माण क्लियर कट नभएकाले पराकम्पन धेरै ठाउँ सतही बनेको छ । यसैले पराकम्पन भविष्यमा साहित्यिक पुस्तकको जमातमा कहाँ उभिन्छ त्यो हेर्न पर्ने हुन्छ । पराकम्पन बस गाडीमा भेट भएको कुनै सहयात्री जस्तै हो या बिहे या मरौ घरमा सघाउन आएको टाडाको सम्बन्ध । जससँग घनिष्ठता बढ्छ । आत्मीयता साटिन्छ। मन भरिका कुराहरु साटी राख्छन् । अनि जान्छन् जिब्रोमा एकदुइवटा घत लाग्ने कुरा दिएर-
“काँडा निकल्नलाई फुलै बनेर नहुने रहेछ !”
“काँडा निकाल्न त काँडै बन्नु पर्ने रैछ !”
” तिमी काँडा बनेर काँडा निकाल्दैमा फेरि त्यो काँडा फूल बन्छ?”
म चाहन्न – काँडा निकाल्ने र न दुख्ने प्रयासमा फूलहरूको संख्या घटोस् ।” ( आफ्ना कुरा)”
नेपाली कविताले धेरै उकालो चढ्नु बाँकी नै छ : डा. इन्दु प्रभा देवी
किताबले मान्छेलाई आफूलाई खोज्न सहयोग गर्छः रमण श्रेष्ठ